ဤသည်မှာသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ (မူဝါဒPoundSlots.com ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဝဘ်ဆိုက်Soho Office 3A၊ Edge Water Complex၊ Elia Zammit လမ်း၊ စိန့်ဂျူလီယန်နိုင်ငံ၊ကုမ္ပဏီ""ငါတို့""ငါတို့""ငါတို့")
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကောက်ယူခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်:
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရှိဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နိုင်ရန်အတွက်သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုအချိန်မရွေးရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင့်လျော်သောထုံးစံနှင့်အချိန်အတိုင်းအတာအတွင်းသင့်အားသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်အမျိုးမျိုးသောနည်းစနစ်များနှင့်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်နှင့်တရား ၀ င်ကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင်သင်လိုအပ်သည့်ရှင်းလင်းချက်ကိုသင့်အားပေးအပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးအရာရှိထံအောက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရချဉ်းကပ်နိုင်သည်။
ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအရာရှိ Progressplay လီမိတက်
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များတွင်သင်တောင်းဆိုသောကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးတက်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများနှင့်အကျိုးစီးပွားများကိုကာကွယ်ရန်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဥပဒေနှင့် / သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းရန်စီးပွားရေးနှင့်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသောရည်ရွယ်ချက်များစာရင်းကိုပေါ်လစီအပိုင်း ၇ တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလိုအပ်ချက်များနှင့် ဦး စားပေးမှုများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကမ်းလှမ်းချက်များပေးရန်သင်နှင့်ပတ်သက်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောကမ်းလှမ်းမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ထိုသို့တောင်းဆိုမှုနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပါမည်။
သင့်အားဒေတာဘာသာရပ်တစ်ခုအနေဖြင့်သင်၏အခွင့်အရေးကိုကျင့်သုံးရန်ကျွန်ုပ်တို့သိသာထင်ရှားသောအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်၊ ဖျက်ရန်၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်သို့မဟုတ်၎င်းကိုသင်သို့မဟုတ်တတိယပါတီသို့လွှဲပြောင်းပေးရန်သင်ဆန္ဒရှိသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထံချဉ်းကပ်နိုင်သည်။ သင်၏ဆန္ဒကိုဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ပါမည်။
ဤပေါ်လစီသည်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုမည်ကဲ့သို့ကောက်ယူသည်၊ မည်သို့စုဆောင်းသည်၊ အသုံးပြုသည်၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်မျှဝေသည်၊ လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်သည်၊
ဤပေါ်လစီတွင်၊ “ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ” ကိုရည်ညွှန်းခြင်းသည်ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ထားသောလူတစ် ဦး နှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုဖြစ်သည်။ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သောလူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသည်မှာခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သောသူ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏“ ပြုပြင်ခြင်း” ကိုကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသည့်နေရာတိုင်းတွင်ဤမူဝါဒ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်စုဆောင်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းသို့မဟုတ်အခြားနည်းဖြင့်ရရှိနိုင်စေခြင်း၊
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီသည်ဒေတာထိန်းချုပ်သူဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်အသုံးပြုသောအခါတိုင်းသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားတက်ကြွစွာပေးလိမ့်မည်။ အခြားဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းများကိုသင်အသုံးပြုခြင်းကိုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းမှသင်နှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကကောက်ယူလိမ့်မည်။
သင်နှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်ရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ သို့သော်အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ခြင်းမပြုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကိုတောင်းဆိုရန်ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အားတားဆီးလိမ့်မည်။ အောက်ဖော်ပြပါဥပမာများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပါ။
ကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်တာဝန်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းများအတွက်ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အဖြစ်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အချို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်လိုအပ်သည့်ဥပဒေဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများရှိသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်၊ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပေးရန်တာဝန်မရှိပါက၊ အကယ်၍ သင်သည်ထိုသို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီအားသင်မပေးပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်သင့်အားထိုကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းလောင်းကစားလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရသင်၏လိပ်စာနှင့်နေထိုင်သည့်နိုင်ငံကိုကောက်ယူရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းကိုမပေးပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုဖောက်သည်တစ် ဦး အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကုမ္ပဏီ၏စာချုပ်ဆိုင်ရာတာဝန်- အချို့သောအခြေအနေများတွင်၊ သင့်အနေနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီမှစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပေးရန်တာဝန်မရှိပါက၊ အကယ်၍ သင်သည်ထိုသို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီအားသင်မပေးပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စာချုပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင့်အားမပေးနိုင်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်သင်၏အကြွေး ၀ ယ်ကဒ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားမပေးအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောခရက်ဒစ်ကဒ်မှတစ်ဆင့်သင်၏ငွေထုတ်ယူခြင်းတောင်းဆိုမှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်နှင့်စာချုပ်ချုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်း- အချို့သောအခြေအနေများတွင်သင့်အကြောင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်နှင့်ကုမ္ပဏီအကြားစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်အတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်၊ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်တာ ၀ န်မရှိပါက၊ အကယ်၍ သင်သည်ထိုသို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီအားသင်မပေးပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူသင့်အားပေးအပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ
ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပေးသောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောအချို့သောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများပေးရန်သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
6. သင်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူသနည်း။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်: အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ပထမအမည်၊ နောက်ဆုံးအမည်၊ ကျားမ၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာ၊ နေထိုင်ရာမြို့၊ နေထိုင်သည့်နိုင်ငံ၊ စာပို့သင်္ကေတ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်၊ ငွေစာရင်း၊ စာရင်းဘာသာစကား၊ World Wide Web နှင့် Social Networks ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသင်၏အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်IP လိပ်စာ၊ ကိရိယာအချက်အလက်၊ လည်ပတ်မှုစနစ်အချက်အလက်၊ ဘရောင်ဇာအချက်အလက်၊ မျက်နှာပြင် resolution၊ Flash ဗားရှင်း၊ လက်ရှိနှင့်ယခင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကြည့်ရှုသည့်နေ့၊
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်အသုံးပြုစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်- သင်၏အပ်ငွေ၊ လောင်းကြေး၊ အပိုဆုကြေး၊ ဂိမ်းအစီအစဉ် (ရက်စွဲ၊ အချိန်နှင့်ကြာချိန်အပါအ ၀ င်)၊ အနိုင်နှင့်အရှုံးများ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပံ့ပိုးမှုမှတဆင့်စုဆောင်းသည်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် / ID / ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နံပါတ်၊
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေသွင်းရန်နှင့်ငွေထုတ်ရန်တောင်းခံသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူပါသည်- ဘဏ်အကောင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ e-wallet အသေးစိတ်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်အသေးစိတ်နှင့်ဓာတ်ပုံ၊ ရန်ပုံငွေအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဖုန်းငွေတောင်းခံလွှာ၊ ဘဏ်ရှင်းတမ်း။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင့်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်- သုံးစွဲသူများ၏ပံ့ပိုးမှု၊ စကားဝိုင်း၊ လူမှုကွန်ယက်များသို့မဟုတ်တိုင်ကြားချက်များ၊ တောင်းဆိုမှုများနှင့်မှတ်ချက်များအပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ပေးသောမည်သည့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုမဆို။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အထောက်အကူပြုကိုယ်စားလှယ်များသည်သင်၏ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများကိုမှတ်တမ်းတင်။ မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
7. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် ၄ င်းတို့၏တရား ၀ င်အခြေခံများကိုစီမံခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်
သင်နှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တရား ၀ င်အခြေခံသည်သဘောတူစာချုပ်ဖြစ်ပါကအောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာကိုအခမဲ့အသိပေးခြင်းဖြင့်သင်၏ခွင့်ပြုချက်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အချိန်မရွေးသင်ခွင့်ပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ customersupport@instantgamesupport.comသို့မဟုတ်သင်၏အကောင့်ရှိသင်၏ချိန်ညှိချက်များကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်။
သင်နှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တောင်းဆိုထားသောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအချို့သို့မဟုတ်အားလုံးကိုသင်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ သို့မဟုတ်သင့်အားထောက်ပံ့ရန်ရည်ရွယ်သည့်ပုံစံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မထောက်ပံ့နိုင်ပါ။ ကြောင်း၏လေးစားမှု၌တည်၏။
သင်ပါ ၀ င်သည့်ကန်ထရိုက်၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သို့မဟုတ်စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီသင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုအဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်သည်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင့်အားအကောင့်ပိုင်ရှင်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏အကောင့်မှရန်ပုံငွေများကိုထုတ်ယူခွင့်ပြုခြင်းတို့အတွက်ဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီသည်တရား ၀ င်သောတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုလိုက်နာရန်လုပ်ငန်းစဉ်သည်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုကိုင်ဆောင်သူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ချထားပေးခြင်းတာဝန်ဝတ္တရားများကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီသည်သို့မဟုတ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်နာရမည့်တရား ၀ င်အကျိုးစီးပွားအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ထုတ်လုပ်မှုကိုလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအားတိုးတက်စေရန်သို့မဟုတ်တရားဝင်တောင်းဆိုမှုများကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရန်အတွက်ဥပမာအားဖြင့်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်တတိယပါတီမှလိုက်နာရန်အတွက်တရား ၀ င်အကျိုးစီးပွားအတွက်ရည်ရွယ်သည့်အခါတိုင်း၊ သင်၏အကျိုးစီးပွားများသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သောအခြေခံအခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကမလွှမ်းမိုးဘဲထိုကဲ့သို့သောအကျိုးစီးပွားများအပေါ်မူတည်သည်။ သင့်အကြောင်း။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်အောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာသို့အသိပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံချဉ်းကပ်နိုင်သည် customersupport@instantgamesupport.com ကျွန်ုပ်တို့မှပြုလုပ်သောပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုရရှိရန်ကုမ္ပဏီသည်သို့မဟုတ်တတိယပါတီ၏တရား ၀ င်အကျိုးစီးပွားအတွက် ရည်ရွယ်၍ ထိုသို့သောအပြောင်းအလဲများကြောင့်သင်နှင့်ပတ်သက်သောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟုနိဂုံးချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
သင်ပါ ၀ င်သည့်ကန်ထရိုက်၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သို့မဟုတ်စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီသင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုအဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်သည်လိုအပ်သည်။
ကုမ္ပဏီသည်တရား ၀ င်သောတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုလိုက်နာရန်လုပ်ငန်းစဉ်သည်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုရန်
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်သင်တောင်းဆိုသည့်အခါတိုင်း၊ အထူးသဖြင့်အပိုဆုကြေးတစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်၊ သင်၏လောင်းကြေးကိုငွေသွင်းရန်၊ ငွေသွင်းရန်နှင့်ငွေထုတ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လိုအပ်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
အချို့သောအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်သင့်အားမွမ်းမံရန်သင့်အားဆက်သွယ်ပါမည်။ ဥပမာအချို့သောတရားစီရင်မှုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရပ်ဆိုင်းရန်လိုအပ်မည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အသွင်အပြင်တစ်ခုပြောင်းလဲနေသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏မေးမြန်းချက်များ၊ တောင်းဆိုမှုများနှင့် / သို့မဟုတ်တိုင်ကြားမှုများကိုတုန့်ပြန်ရန်နှင့်သင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်
သင်အသုံးပြုသောကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်အားဖောက်သည်အထောက်အပံ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးရန်သင့်အကြောင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြားအခြေအနေများတွင်သင်ပြုလုပ်သောသင်ကိုယ်တိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်း (သို့မဟုတ်အလားတူ) တောင်းဆိုမှုများကိုဖြည့်ဆည်းရန်သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
ကုမ္ပဏီသည်သို့မဟုတ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်နာရမည့်တရား ၀ င်အကျိုးစီးပွားအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်လိုအပ်သည်။
သင် ၀ ယ်ယူထားသောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုက်ဆံစုဆောင်းရန်
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံနှင့်တိုးမြှင့်မှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်နှင့်သင့်အားအပိုဆောင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုအသစ်များ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်သင့်အားကမ်းလှမ်းရန်သင့်ထံတင်ပြသည့်ပစ္စည်းများကိုပြုပြင်ရန်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည် သင့်ရဲ့ ဦး စားပေးမှု, အပြုအမူ, ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အကျိုးစီးပွားရန်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေဆိုင်ရာတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီမံသည်။ တရား ၀ င်တားမြစ်ချက်ကြောင့်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအရွယ်မရောက်သေးသူများအားအသုံးပြုခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့၏တရား ၀ င်ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအချို့သောတရားစီရင်မှုမှဖောက်သည်များအားတားမြစ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်အသစ်များကိုကမ်းလှမ်းရန်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးတက်စေရန်နှင့်အသစ်များကိုကမ်းလှမ်းရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ယခင်အသုံးပြုမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရရှိသောမှတ်ချက်များနှင့်တိုင်ကြားချက်များအပြင်အမှားအယွင်းများနှင့်အမှားအယွင်းများပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလိမ်လည်ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းစွာအသုံးပြုခြင်းကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ငွေကြေးခ ၀ ါချခြင်းကိုတားဆီးရန်
ကျွန်ုပ်တို့ထံမှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများလက်ခံရရှိရန်သင်သဘောတူထားသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိထုတ်ကုန်များနှင့်ဆင်တူသည်ဖြစ်စေ၊ ယခုရှိ၊ အနာဂတ်၌ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများအားသင်သဘောတူသည့်နည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့်သင်ပို့ပေးပါမည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများ၊ နှင့် / သို့မဟုတ်တတိယပါတီ၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများရှိမရှိ။
အောက်ဖော်ပြပါအီးမေးလ်လိပ်စာသို့“ unsubscribe” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်အခမဲ့အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ခြင်းဖြင့်သင်၏သဘောတူညီချက်အားမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်ကိုဤနေရာတွင်ရှင်းလင်းထားပါသည်။ customersupport@instantgamesupport.com သို့မဟုတ်သင့်ထံပို့လိုက်သောမည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းမဆိုတွင်စာရင်းဖျက်သိမ်းမှုကိုနှိပ်ပါ။ သင်ပယ်ဖျက်လိုသည့်မည်သည့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်း (တစ်ခု၊ အချို့သို့မဟုတ်အားလုံး) ကိုရွေးချယ်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ခြင်းများပြုလုပ်သောအမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်
ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများတွင် back office လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ မဟာဗျူဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းနှင့်အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းအပါအ ၀ င်ကိစ္စရပ်များစွာတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန်အတွက် (စာရင်းအင်းများအပါအ ၀ င်) အမျိုးမျိုးသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစီအမံများကိုအသုံးပြုသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏နှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏အကျိုးစီးပွားများ၊ အခွင့်အရေးများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်တရား ၀ င်တောင်းဆိုမှုများကိုစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ကာကွယ်ခြင်းအပါအ ၀ င်
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယပါတီများ၏အကျိုးစီးပွားများ၊ အခွင့်အရေးများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်မူဝါဒများအပါအ ၀ င်မည်သည့်ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်သဘောတူညီမှုမဆို။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်နာရမည့်တရား ၀ င်အကျိုးစီးပွားအတွက် ရည်ရွယ်၍ လိုအပ်ပါကအောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာသို့အသိပေးခြင်းဖြင့်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဤသို့သောဆောင်ရွက်မှုများကိုကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ customersupport@instantgamesupport.comသင်၏အကျိုးစီးပွားများ၊ အခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုကျော်လွှားခြင်းသို့မဟုတ်တရားဝင်တောင်းဆိုမှုများကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏သုံးစွဲသူများအတွေ့အကြုံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်နှင့်ထုတ်ကုန်များအပါအ ၀ င်အပိုဆောင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုအသစ်များ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းရန်ကုမ္ပဏီမှဖောက်သည်များကိုအထူးသီးသန့်စီစဉ်ထားသောကမ်းလှမ်းမှုများကိုပေးသည်။ နှင့်တတိယပါတီများ၏န်ဆောင်မှုများ။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏အကြိုက်များ၊ အမူအကျင့်၊ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အကျိုးစီးပွားများအပေါ် မူတည်၍ သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ပြီးသည့်နောက်တွင်ပြုလုပ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်နည်းစနစ်များကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့အားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအပါအ ၀ င်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ကောက်ချက်များကိုပေးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်ဤသို့သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်နိဂုံးများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမည်ဟုထင်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဥပမာသင်၏ကစားပုံစံ၊ လိပ်စာနှင့်အသက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများစသည်တို့ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ရက်သတ္တပတ်၏အချိန်နှင့်နေ့ကို အခြေခံ၍
ကျွန်ုပ်တို့ထံမှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများလက်ခံရရှိရန်သင်သဘောတူထားသည့်အတိုင်းအတာနှင့်အလားတူဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်နိဂုံးချုပ်ခြင်းများကိုအသုံးပြုသည်။ သင့်အနေနှင့်သင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမည်ဟုထင်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းရန်ရည်ရွယ်သည်။
သင့်အကြောင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်လုပ်ဆောင်သောအခါမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဤရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအတိုင်းအတာကိုပါ ၀ င်ခြင်းအပါအ ၀ င်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အီးမေးလိပ်စာ customersupport@instantgamesupport.comဤသို့သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ရပ်ဆိုင်းမည်မဟုတ်ပါ။
ထို့အပြင်၊ အောက်ပါ email လိပ်စာသို့“ unsubscribe” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်အခမဲ့အီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများလက်ခံခြင်းမှသင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ customersupport@instantgamesupport.com
ကုမ္ပဏီသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီ၏အုပ်စုများအတွင်းရှိကုမ္ပဏီများနှင့်ကုမ္ပဏီ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကမ်းလှမ်းရန်ကုမ္ပဏီများနှင့်ခွဲဝေသည်။
KYC နှင့် AML ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်လိုင်စင်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်လိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာစေရန်သေချာစေရန်ရည်ရွယ်သည်။
ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ငွေပေးချေသူများနှင့်ငွေပေးချေသူများ။
တာဝန်သိသောလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဥပမာ - လူတစ် ဦး ၏အလောင်းအစားလုပ်ပိုင်ခွင့်သည်သူ၏ကြွယ်ဝမှုနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေလိုသည်။
Cloud computing ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးပေးသူ။
လိမ်လည်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့် chargeback စုံစမ်းစစ်ဆေး။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး (ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြူရောင်တံဆိပ်မိတ်ဖက်များနှင့်သူတို့၏ကန်ထရိုက်တာများအပါအ ၀ င်) ။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများအပါအဝင်အီးမေးလ်များ၊ SMS များ၊ ပုံမှန် (ခရု) စာပို့ခြင်း၊ တွန်းအားပေးခြင်းအကြောင်းကြားစာများနှင့်အခြားအီလက်ထရောနစ်မက်ဆေ့ခ်ျများကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့်ပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်း။
သုတေသန, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, နည်းပညာနှင့်ရောဂါရှာဖွေန်ဆောင်မှု။
ဒေသဆိုင်ရာ၊ တရားဝင်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လိုင်စင်နှင့်လောင်းကစားလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပိုင်များနှင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအများပြည်သူနှင့်မျှဝေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏နှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏အကျိုးစီးပွားများ၊ အခွင့်အရေးများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစတင်ခြင်း၊ တရားဝင်တောင်းဆိုမှုများ။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်ဝယ်ယူသူများသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသို့မဟုတ်ချေးငှားသူများကိုကုမ္ပဏီနှင့် / သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကုမ္ပဏီအုပ်စုအတွင်းမှသို့မဟုတ်အလားတူငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်တွင်ထုတ်ဖော်နိုင်သည်။ အပါအ ၀ င်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းချခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ ၀ င်သည့်ကုမ္ပဏီအုပ်စုများအတွင်း) နှင့် / သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီနှင့် / သို့မဟုတ်မည်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်မဆိုပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကုမ္ပဏီအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအုပ်စုအတွင်း။
11. သင့်အကြောင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အခွင့်အရေး
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအခွင့်အရေးများကိုသင်ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်၏အခွင့်အရေးကိုအောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာသို့သုံးရန်တောင်းဆိုသည့်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ခြင်းဖြင့်ထိုသို့သောအခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးနိုင်သည် - customersupport@instantgamesupport.com
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်လုပ်ဆောင်နေသည်၊ မဟုတ်သည်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏အတည်ပြုချက်မှသင့်တွင်ရရှိရန်အခွင့်အရေးရှိသည်၊ ၎င်းသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်လျှင် - (၁) ပြုပြင်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များ၊ (၂) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အမျိုးအစားများ၊ အထူးသဖြင့်ဥရောပစီးပွားရေးDataရိယာ (EEA) အပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှတတိယနိုင်ငံများမှပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အထူးသဖြင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသမည့်သူသို့မဟုတ်အမျိုးအစားများကိုလက်ခံရရှိသူသို့မဟုတ်အမျိုးအစားများ၊ (၄) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းမည့်မျှော်မှန်းထားသောကာလသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်လျှင်ထိုအချိန်ကာလကိုသတ်မှတ်ရန်အသုံးပြုသည့်စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ (၅) ကုမ္ပဏီမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်း (သို့) သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအားကန့်သတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိုဆောင်ရွက်မှုကိုကန့်ကွက်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း၊ (၆) ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့တိုင်ကြားချက်တင်ရန်အခွင့်အရေး၊ (၇) သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင့်ထံမှမကောက်ယူပါက၎င်းရင်းမြစ်နှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မဆို၊ (8) ပရိုဖိုင်း၏တည်ရှိမှု; နှင့် (9) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို EEA ပြင်ပရှိတတိယနိုင်ငံသို့သို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းသောအခါလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောသင့်လျော်သောအကာအကွယ်များ။
သင်နှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီမှကုမ္ပဏီမှရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ သင့်အနေဖြင့်ဖြည့်စွက်ဖော်ပြချက်ပေးခြင်းအပါအ ၀ င်မပြည့်စုံသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြီးစီးအောင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင့်အနေဖြင့်အောက်ပါအကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီမှကုမ္ပဏီထံမှသင့်အားရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည် - (က) ကောက်ယူစုဆောင်းထားသောသို့မဟုတ်အခြားလုပ်ဆောင်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမလိုအပ်တော့ပါ။ (ခ) သင်ကခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး၊ (ဂ) သင်နှင့်သင်၏အခြေအနေနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းပြချက်များအရကျွန်ုပ်တို့နှင့်အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလိုက်နာရမည့်တရားဝင်အကျိုးစီးပွားများအပေါ်အခြေခံသည့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်ကန့်ကွက်သည်။ ; ()) သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်သင်ကန့်ကွက်သည်။ (င) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတရားမ ၀ င်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ (စ) သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဥရောပသမဂ္ဂသို့မဟုတ်အသင်း ၀ င်နိုင်ငံဥပဒေအရတရား ၀ င်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလိုက်နာရန်ဖျက်ပစ်ရမည်။
ဤအခွင့်အရေးသည်လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်သည်အထိမသက်ဆိုင်ပါ - (က) ဥရောပသမဂ္ဂ (သို့) အသင်း ၀ င်နိုင်ငံဥပဒေအရကုမ္မဏီလက်အောက်ခံဥပဒေအရဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သောဥပဒေဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားကိုလိုက်နာရန်၊ သို့မဟုတ် (ခ) တရားဝင်တောင်းဆိုမှုများကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊
သင့်အနေဖြင့်အောက်ပါတို့မှတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သင်၏အကြောင်းကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီမှကန့်သတ်ချက်အားကုမ္ပဏီမှရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (က) သင်၏အချက်အလက်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသင်ကသင့်အားအငြင်းပွားစေသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ (ခ) လုပ်ငန်းစဉ်သည်တရားမ ၀ င်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖျက်သိမ်းခြင်းကိုသင်ဆန့်ကျင်။ အစားထိုးအသုံးပြုခြင်းကိုတားမြစ်ပါ။ (ဂ) ကုမ္ပဏီသည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမလိုအပ်တော့ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်တရား ၀ င်တောင်းဆိုမှုများအားတည်ဆောက်ခြင်း၊ ကျင့်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်သင်မှလိုအပ်သည်။ ()) သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်နာရမည့်တရား ၀ င်အကျိုးစီးပွားအတွက်သင်၏လိုအပ်ချက်များ၊ အခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုကျော်လွှားသောအပြောင်းအလဲများအတွက်ခိုင်လုံသောခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မပြသလျှင်သင့်အကြောင်းသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်လျှင် ဥပဒေရေးရာတောင်းဆိုမှုများတည်ထောင်ခြင်း, လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်ကာကွယ်ရေး; (င) သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပြီး၎င်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆက်စပ်မှုအတိုင်းအတာကိုဖော်ပြခြင်း။
သင်၏တောင်းဆိုမှုအပြီးတွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီမံဆောင်ရွက်ခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသည့်အခါထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသိုလှောင်မှုမှအပသင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သို့မဟုတ်တရားဝင်တောင်းဆိုမှုများအားတည်ထောင်ခြင်း၊ ကျင့်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်သာဖြစ်ရမည်။ အခြားလူပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ဥရောပသမဂ္ဂသို့မဟုတ်အသင်းဝင်နိုင်ငံ၏အရေးကြီးသောအများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်။
သင့်အနေဖြင့်သင်ကုမ္ပဏီသို့သင်ပေးအပ်ထားသောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစနစ်တကျအသုံးပြုလေ့ရှိပြီးစက်ဖတ်နိုင်သောပုံစံဖြင့်လက်ခံရရှိပိုင်ခွင့်ရှိပြီးထိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအခြားထိန်းချုပ်သူသို့လွှဲပြောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်သင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်သင်ပါဝင်သောစာချုပ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ (ခ) ပြုပြင်ခြင်းကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်သည်။
သင်၏ဒေတာသယ်ဆောင်နိုင်မှုကို အသုံးချ၍ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီမှနည်းပညာပိုင်းအရဖြစ်နိုင်သည့်အခြားထိန်းချုပ်သူသို့တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းခွင့်ရှိသည်။ သင်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာသင်၏အခွင့်အရေးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်နှင့်သင်၏ဖျက်ပိုင်ခွင့်အောက်ရှိကုမ္ပဏီ၏အခွင့်အရေးများကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဒေတာသယ်ဆောင်နိုင်မှုသည်အခြားသူများ၏အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုမထိခိုက်စေရ။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခြေအနေနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်များအရကုမ္ပဏီနှင့်အခြားတတိယပါတီမှတရား ၀ င်အကျိုးစီးပွားများအပေါ်အခြေခံထားသောသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအချိန်မရွေးကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ထိုကဲ့သို့သောတရား ၀ င်အကျိုးစီးပွားများအပေါ်အခြေခံသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ သင်၏အကျိုးစီးပွားများ၊ အခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုကျော်လွှားခြင်းသို့မဟုတ်တရား ၀ င်တောင်းဆိုမှုများကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ကျင့်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်ကာကွယ်ခြင်းတို့အတွက်ခိုင်လုံသောတရားဝင်ခိုင်လုံသည့်အကြောင်းပြချက်များမပြသပါကသင့်အကြောင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မပြုလုပ်ရ။
သင့်အနေဖြင့်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအပြောင်းအလဲအတွက်အချိန်မရွေးကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ၎င်းတွင်၎င်းသည်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အတိုင်းအတာအထိပါ ၀ င်သည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအချိန်မရွေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်ထားသောသင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုရုပ်သိမ်းခြင်းမပြုမီသဘောတူခွင့်ပြုချက်အပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။
ဤအပိုင်း ၁၁ တွင်ဖော်ပြထားသည့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အခွင့်အရေးများကိုဥရောပသမဂ္ဂ (သို့) အသင်း ၀ င်နိုင်ငံဥပဒေအရကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကန့်သတ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပိုင်း ၁၁ တွင်ဖော်ပြထားသည့်သင်၏အခွင့်အရေးများနှင့်အညီတောင်းခံထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမလိုအပ်ဘဲနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲနှင့်တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်တစ်လအတွင်းသင့်အားပေးအပ်မည်။ ထိုကာလကိုရှုပ်ထွေးမှုနှင့်တောင်းဆိုမှုအရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါကနောက်ထပ်နှစ်လထပ်တိုးနိုင်သည်။ တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်တစ်လအတွင်းနောက်ကျရခြင်းအကြောင်းရင်းများနှင့်အတူမည်သည့်ထပ်တိုးမှုမျိုးကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ထံအကြောင်းကြားပါမည်။
ဤပုဒ်မ ၁၁ တွင်ဖော်ပြထားသောသင်၏အခွင့်အရေးနှင့်အညီတောင်းခံထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဤအပိုင်း ၁၁ တွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက၊ အခမဲ့ပေးရမည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့သည်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့်၊ (က) သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်တောင်းဆိုသောအရေးယူမှုအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအခကြေးငွေပေးရသည်။ (ခ) တောင်းဆိုချက်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ငြင်းဆိုခြင်း။
သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ဤအခန်း ၁၁ တွင်ဖော်ပြထားသည့်သင့်အခွင့်အရေးများအရကုမ္ပဏီသည်သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်သင်၏လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောအခါနှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောအခါ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည့်ကွတ်ကီးဖိုင် (စာသားဖိုင်ငယ်တစ်ခု) ကိုတပ်ဆင်သည်။ သင်၏ cookies များကိုကျွန်ုပ်တို့ကသင်၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာနှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုမှတ်မိစေရန်၊ သင့်အားစိတ် ၀ င်စားမည့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သင့်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်သင်နှင့်သင်၏အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကွတ်ကီးများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းသင်၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောကိန်းဂဏန်းများကိုစုဆောင်းပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုလုပ်ဆောင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော cookies အချို့သည် session cookies များဖြစ်ပြီးသင်၏စက်ပစ္စည်းထဲသို့ခေတ္တခဏဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသင် web browser ကိုပိတ်လိုက်သည်အထိကြာရှည်သည်။ အချို့ကသင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းပြီးနောက်တွင်သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်၌တည်မြဲသော cookie များဖြစ်သည်။ သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပြန်လာသောအခါသင်ပြန်လာ or ည့်သည်အဖြစ်။
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော cookies များသည်၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအရအောက်ပါအတိုင်းခွဲခြားထားသည် -
၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားလာရန်နှင့်သင်တောင်းဆိုထားသောအင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုရန်ဤကွတ်ကီးများသည်လုံးဝလိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်သင့်အားသင်တောင်းဆိုခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
ထိုကဲ့သို့သောကွတ်ကီးများသည်သင်၏ကိရိယာကိုသတင်းအချက်အလက်ရယူရန် (သို့) သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းစေရန်ကူညီပေးသည်။ သို့မှသာသင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုနိုင်မည်၊ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များကို အသုံးပြု၍ သင်ယခင်ကလည်ပတ်ခဲ့သည့်စာမျက်နှာများသို့ပြန်သွားရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ဤကွတ်ကီးများသည်သင်၏အကောင့်နှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်။ ဥပမာ - အသုံးပြုသူအမည်၊ နောက်ဆုံးဝင်ရောက်သည့်နေ့စွဲနှင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုပိတ်လိုက်သောအခါဤ cookies များကိုဖျက်ပစ်သည် (session cookies)
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်သင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ပြန်လာသောအခါသင့်အားအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီးစိတ်ကြိုက်အင်္ဂါရပ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ဘာသာစကားနှင့်ရွေးချယ်မှု (ဥပမာ -) ကိုမှတ်မိရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင်၏ကွတ်ကီးများ၊ သင်ကစားသောဂိမ်းများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဦး စားပေးမှုများစသည်တို့ကဲ့သို့သင်၏ကွတ်ကီးများကသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်။
ဤကွတ်ကီးများသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ စုစည်းထားသောကိန်းဂဏန်းများကိုဖော်ပြရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသည်; ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤ cookies များသည်အချိန်ကာလအမျိုးမျိုးအတွက်တရားဝင်သည်။ သင်၏ browser ကိုပိတ်လိုက်သောအခါအချို့သည်ဖျက်ပစ်ခံရပြီးအချို့မှာအကန့်အသတ်မရှိသက်တမ်းရှိသည်။
တတိယပါတီစျေးကွက်ရှာဖွေရေး / Cookies ပစ်မှတ်ထား
ဤကွတ်ကီးများသည်သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့်လုပ်ရပ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကြော်ငြာများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးများနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုပိုမိုသင့်လျော်သောပုံစံဖြင့်ပြသရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည်ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ထိရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်။ ဤ cookies များသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ သင်ကြည့်ရှုခဲ့သောစာမျက်နှာများနှင့်သင်အသုံးပြုသောထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသို့သင်၏လည်ပတ်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်သည်။
ဤ cookies အချို့ကို third party များမှအသုံးပြုသည်။
အချို့သောသို့မဟုတ်အားလုံးသော cookies များကိုပိတ်ရန်နှင့်ဖျက်ရန်သင်၏ browser setting ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လူကြိုက်အများဆုံးဝဘ်ဘရောက်ဇာအချို့နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါလမ်းညွှန်များကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
သို့သော် အကယ်၍ သင်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကဝက်ဘ်ဆိုက်၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးသည်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။
ကုမ္ပဏီသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဤပေါ်လစီတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ် သ၍ သို့မဟုတ်ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ မူဝါဒနှင့်အမိန့်များအရလိုအပ်သောကာလပတ်လုံးထိန်းသိမ်းထားရမည် ငါတို့ရန်
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အကောင့်အကောင့်ကုန်ဆုံးပြီးနောက်အနည်းဆုံး (၅) နှစ်အကြာသင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတတိယနိုင်ငံ (ဆိုလိုသည်မှာအီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအပြင်အိုက်စလန်၊ နော်ဝေးနှင့် Liechtenstein) သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်ကုမ္ပဏီသည်သင့်အကြောင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်မှုကိုသေချာစေရန် ရည်ရွယ်၍ သင့်လျော်သောအကာအကွယ်များယူရမည်ဖြစ်ပြီးဒေတာအကြောင်းအရာအတွက်လိုက်နာနိုင်သောအချက်အလက်ဘာသာရပ်အခွင့်အရေးနှင့်ထိရောက်သောဥပဒေရေးရာကုစားမှုများကိုရရှိနိုင်သည်။
လွှဲပြောင်းမှုသည်တတိယနိုင်ငံသို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့ဖြစ်သည်။ အီးယူကော်မရှင်သည်စည်းမျဉ်းဥပဒေ (EU) 2016/679 ၏ပုဒ်မ ၄၅ (၃) အရ၎င်းတို့အားလွှဲပြောင်းပေးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလုံလောက်သောအကာအကွယ်ပေးကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ၂၀၁၆ Aprilပြီ ၂၇ ရက်ဥရောပလွှတ်တော်နှင့်ကောင်စီ (" GDPR");
လွှဲပြောင်းခြင်းကို GDPR ၏ပုဒ်မ ၄၆ (၂) (က) အရအစိုးရအာဏာပိုင်များနှင့်အဖွဲ့များအကြားတရားဝင်ချုပ်နှောင်ထားသည့်ပြဌာန်းချက်များအရဆောင်ရွက်သည်။ ဒါမှမဟုတ်
လွှဲပြောင်းမှုသည် GDPR ၏အပိုဒ် ၄၆ (၂) (ဂ) အရအီးယူကော်မရှင်မှချမှတ်ထားသောစံဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဝါကျများနှင့်အညီဖြစ်သည်။ အီးယူကော်မရှင်မှချမှတ်သောဝါကျများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည် https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးသဖြင့်မတော်တဆသို့မဟုတ်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထုတ်ဖော်ခြင်းသို့မဟုတ်ကူးစက်ခံရသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရယူခြင်းမှတင်ပြသောအန္တရာယ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏သင့်လျော်သောလုံခြုံရေးအဆင့်ကိုသေချာစေရန်သင့်လျော်သောနည်းပညာနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအစီအမံများကိုကျွန်ုပ်တို့အကောင်အထည်ဖော်သည်။ သိမ်းဆည်းထားသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်လုပ်ငန်းများ၌။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပရှိတရား ၀ င်သို့မဟုတ်အခြားတာဝန်ဝတ္တရားများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအများပြည်သူအာဏာပိုင်များကဲ့သို့သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များသို့လွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်မှုအဆင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကန့်သတ်ထားသည်။
အင်တာနက်မှတဆင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုအပြည့်အဝလုံခြုံစိတ်ချလို့မရပါ။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီမှသင်လုပ်ကိုင်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်လွှဲပြောင်းသောအခါသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်မှုကိုကုမ္ပဏီမှမအာမခံနိုင်ပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်တတိယပါတီ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များနှင့် / သို့မဟုတ်အပလီကေးရှင်းများသို့လင့်ခ်များကိုပေးလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အပလီကေးရှင်းများသည်သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းကိုကုမ္ပဏီကထိန်းချုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့က၎င်းဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များ၊ သူတို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးမူဝါဒများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်မရှိပါ ဤပေါ်လစီသည်ထိုကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် / သို့မဟုတ်အပလီကေးရှင်းများမှတဆင့်လုပ်ဆောင်သောမည်သည့်လုပ်ရပ်နှင့်မျှမသက်ဆိုင်ပါ
သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီများနှင့် #39 ကိုမည်သည့်နေရာ၌မဆို၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် / သို့မဟုတ်အပလီကေးရှင်းများ၊ ၄ င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မူဝါဒများအားဤဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် / သို့မဟုတ်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုအသုံးမပြုမီနှင့်သင့်အားဖြင့်မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုမထုတ်ဖော်မီသင်သေချာစွာစစ်ဆေးရန်အကြံပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပေါ်လစီ၏စည်းကမ်းချက်များအားအခါအားလျော်စွာကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပေါ်လစီကိုပြင်ဆင်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိနောက်ဆုံးပေါ်ပေါ်လစီအားထုတ်ပြန်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပြင်ဆင်ချက်များအားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပေါ်လစီအားသိသာထင်ရှားသောပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပြင်ဆင်ချက်များအကြောင်းသင့်အားသင့်လျော်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့်သင့်အားအကြောင်းကြားရန်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ထိုပြင်ဆင်ချက်များအကြောင်းအသိပေးခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းလိမ့်မည်။ မဖော်ပြထားပါကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအားလုံးသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိအသစ်ပြောင်းလဲထားသောပေါ်လစီကိုထုတ်ပြန်ပြီးမှအာဏာတည်လိမ့်မည်။
ဗားရှင်း 2.0 - 24.05.2018